Chili Piper: Rechọgharị usoro ihe omume gị, kalịnda, na igbe mbata | Martech Zone
Chili Piper: inchọgharị usoro ihe omume gị, kalenda, na igbe mbata
Chili Piper bụ usoro ịhazi usoro akpaaka nke na-ahapụ gị ozugbo iru eru, ụzọ, na nzukọ ahịa akwụkwọ na inbound na-eduga oge ha gbanwere na weebụsaịtị gị.
Otu Chili Piper na-enyere ndi ahia aka
Enwekwaghi mpempe akwụkwọ mgbasa ozi na-agbagwoju anya, enweghị ozi ịntanetị na-aga n'ihu na akwụkwọ ozi iji debe nzukọ, ọ nweghịkwa ohere furu efu n'ihi ịgbaso usoro.
Chili Piper Atụmatụ Gụnyere
Chili Piper na-enye atụmanya gị ezigbo usoro ịhazi usoro maka onye ọ bụla nke na-atụgharịkwu na-eduga na nzukọ ruru eru.
Ngwa ngwa jikọọ na inbound edu - Concierge na-eme ka atụmanya gị nwee nzukọ oge ma ọ bụ bido ịkpọ oku ozugbo ị nyefere ụdị weebụ. Kwuo maka ohere ahịa ndị agbaghara. Ugboro abụọ ọsọ gị na-eduga site na ijikọta ndị na-azụ ahịa na ndị zụrụ ahịa oge ha meriri ntinye na ụdị weebụ gị.
Akwụkwọ nzukọ ebe ọ bụla ị na-arụ ọrụ - Site na ntaneti akwụkwọ, ntughari gị nwere ike ịde nzukọ na inye aka na sekọnd na-enweghị ịgbanwee ihu.
Otu-pịa ntinye akwụkwọ karịrị email - Belata clicks na ịtọọ oge nzukọ ngwa ngwa. Embed nnweta gị ozugbo na email gị ka atụmanya akwụkwọ na otu pịa.
Real-oge oku na video nkata - Onweghi ihe n’egosi ezigbo ndu dika onye di njikere ikwu okwu ugbu a. Nye atụmanya nhọrọ ịmalite ekwentị dị ndụ ma ọ bụ oku vidiyo na weebụsaịtị gị.
Kesaa nzukọ nye ezigbo nnabata na ezigbo oge - Site na Ntugharị ọgụgụ isi, a na-ahazi nzukọ na akpaghị aka n'etiti ndị ahịa gị, na-enye gị ohere iji kesaa ụzọ ziri ezi ma kpochapụ mpempe akwụkwọ.
Izuzu, ụzọ, na akwụkwọ n'otu pịa - Ntugharị ụzọ na-akpaghị aka na-eme ka o doo anya na a na-ahazi atụmanya ruru eru na ezigbo rep na ezigbo oge. Jiri ozi anakọtara site na ibe weebụ gị iji ruo eru inbound na-eduga na ezigbo oge ma duru ha gaa zụọ ahịa ahịa ziri ezi.
Gburugburu robin routing - Gbaa mbọ hụ na nkesa izizi ziri ezi site na ịgba ịnyịnya na-akpaghị aka site na otu ndị na-ere ahịa mgbe ọ bụla edere nzukọ ọhụụ.
Detuo mmekọrịta ọ bụla na Salesforce - Chili Piper na-edekọ ihe na-akpaghị aka na Salesforce. All ndetu, ibugharị, na nzute nkọwa na-oge-zọọ na e dere na-enyere gị aka mma jikwaa pipeline.
Tụọ ma bulie ọnụego mgbanwe mgbanwe - Sochie usoro niile nke nzukọ, gụnyere ntinye akwụkwọ, nzukọ emere, enweghị egosi, ndokwa oge, na ịkagbu. Mee akụkọ na Salesforce iji ghọta nke ọma ma bulie ntụgharị ụzọ inbound gị.
Chili Piper jikọtara ya na sọftụwia azụmaahịa na ngwa ahịa kachasị amasị gị - gụnyere Salesforce Pardot, Hubspot, Marketo, Salesforce, Eloqua, Twilio, Zapier, Intercom, GoToMeeting, na bia.
Debanye maka Chili Piper n'efu
Ngosipụta: Abụ m mmekọ maka Chili Piper.
Tags: ose chiliokwuokpokoroájáahịakalenda ahịaire oku edekọire oku na ndekọusoro ihe omume ahianzukọ ahịaire ahiaahịa video nkatandị ahịaMgbaghara ahịaTwilioikembugharị
Channable: Nye ha Ngwaahịa Iji Ahịa Comparison nrụọrụ, Mmekọ, Ahịa, na Ad Netwọk
Otu esi agafe ma chekwaa Kaadị Kọntaktị Salesforce na Mpempe Akwụkwọ na WordPress